जनकपुरमा १५१ फिट अग्लाे सीताको मूर्ति बनाउने काजलको सपना पूरा होला ? « News24 : Premium News Channel
जनकपुरमा १५१ फिट अग्लाे सीताको मूर्ति बनाउने काजलको सपना पूरा होला ?
जनकपुरधाम, २१ माघ । जनकपुरधाममा एशियाकै ठूलो सीताको मूर्ति बनाउने अवधारणा लिएर एक युवती अघि सरेकी छिन् ।
जनकपुरधाम उपमहनगरपालिका–४ घर भई हाल अमेरिकामा बस्दै आएकी ‘मैथिली दिवा यूएसए’ नामले चर्चित काजल कर्णले जनकपुरको ऐतिहासिक रंगभूमि मैदान (बाह्रविघा)मा आदर्श नारी सीताको एशियाकै ठूलो मूर्ति बनाउने अवधारणा लिएर विभिन्न निकायसँग सुझाव संकलन गरिरहेकी छिन् ।
सोमबार जानकी मन्दिरमा एक पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै कर्णले सीतालाई योद्धाको रुपमा चिनाउन १५१ फिट अग्लाे मूर्ति बनाउने जानकारी दिएकी हुन् । उनले सीता सात वर्षकै उमेरमा धनुष उठाउन सक्ने अद्भुत प्रतिभा भएकी एक प्रेरणाको स्राेत हुनुका साथै एशियामै चर्चित एक आदर्श पौराणिक नारी भएकाले उनको मूर्ति बनाउन आफू लागिपरेको बताइन् ।
उनका अनुसार गोलो आकारको पृथ्वीमाथि सीता धनुष उठाएको जस्तो देखिने र पृथ्वीको अन्य भागमा साना–साना रामायणलाई दर्शाउने आकृतिसहितको मूर्ति बनाउने योजना रहेको छ । मूर्तिले पर्यटकलाई आकर्षण गर्नुको साथै गिनिज बुकमा समेत नाम लेखाउन यस्तो अवधारणा ल्याएको कर्णको भनाइ छ ।
यद्यपि उनले यसको लागतबारे हाल यकीन नभएको आफू यस काममा अग्रसर भए पनि सरकारले केही आर्थिक सहयोग गरे मूर्तिको निर्माणले गति लिने जनाइन् । सरकारले सीताको सहनशीलतालाई योद्धाको रुपमा प्रचार गर्न सहयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ रहेको थियो ।
मातृभूमिप्रतिको लगाव र नारीको अब्बल चरित्र चित्रण गर्ने अठोटका साथ उनी सीताको मूर्ति बनाउने सपनामा लागेको बताउँछिन् ।